Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ezokuzijabulisa » Ucansi Lwamahhala Nohambo Lomuzi
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Culinary • Amasiko • Ezokuzijabulisa • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Imishado Yezothando Izinyanga Zekhefu • Shopping • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Linda. Ngabe lokho bekufanele kufundwe Ucansi Lwamahhala Kuma-City Tours? Ingabe lokho bekungeke kulunge ngohlelo lolimi? Impela bekungaba njalo, kepha kungaba iphutha nje ngokusobala ngohambo esizolihlola. Sifuna ukuvakashela izindawo zocansi nezaseCity.
Ubani ongakhumbuli indlu kaCarrie enekhabethe layo elihlekisayo?
Noma isitolo sezicathulo iManolo Blahniks esidonse amehlo akhe kaningi lapho ehamba ekhuluma. Uyawukhumbula lowo mugqa odumile, “Sawubona, sithandwa” ngenkathi engakhulumi ngendoda?
Futhi-ke kukhona iMeatpacking District lapho uSamantha angena ku-tiff onama-transvestites ama-3.
Kubalandeli bokufa abanzima bohlelo lwe-TV oluthi “Sex and the City,” kunezinkumbulo eziningi kakhulu nxazonke zeNew York City lapho le ndaba yenzeka khona nabalingiswa abaphambili uCarrie, Samantha, Miranda, noCharlotte. Ukusuka endaweni abayithandayo ukuhlangana ngokudla nobudlelwano, eya endleleni ethandwa kakhulu nguCharlotte yokugijima eJacqueline Kennedy Onassis Reservoir, kubha kaSteve ayiqambe ngegama lenja yakhe, ezindaweni ezinabantu abaningi abahlangane nabo ngeziphuzo, i-NYC Sex and the City i-hotbed, ayikho i-pun ehlosiwe.
Impela, ungakhokhela uhambo lwezocansi nolweDolobha - ngebhasi ngokwesibonelo, kepha kungani ungahloli ngesikhathi sakho nabangane bakho izinkambo ezizimele eziqondiswa mahhala?
Nawa amanye amabala adumile aboniswe ohlelweni lwe-TV ongafuna ukungena kuwo ukuze ulume, uphuze noma ubuke.
Manolo Blahnik Ku-31 W 54th Street
UCarrie udlula esitolo sezicathulo iManolo Blahnik izikhathi ezingaphezu kwesisodwa kulo lonke uchungechunge lombukiso we-TV. Isigcawu esithile ikakhulukazi lapho ebona ukuthi usebenzise imali engama- $ 40,000 ezicathulweni yedwa - imali abeyidinga manje ukuthenga indlu yakhe.
Uyakhumbula lapho uCarrie noMnu Big bewela emanzini kule ndawo yokudlela yaseCentral Park? Bebehlukene kodwa banquma ukuhlangana ngesidlo sasemini ukuze babambe. Ngemuva kokuthi uMiranda emxwayisile ukuthi kungcono angamqabuli, lapho uMnu Big encike kulokho nje, uCarrie wabuyela emuva ehla emanzini wamletha naye.
Indawo yokudlela yaseDa Marino ku220 W 49th Street
Uma sikhuluma ngoCarrie noBig nezindawo zokudlela, kuthiwani ngeDa Marino uma sebebuyelana futhi ngenkathi bedla isidlo sakusihlwa endaweni yokudlela yase-Italiya ethokomele futhi ethokomele, lapho uCarrie efunda khona ukuthi uvamile njengoba umnikazi efika ezobabingelela. Ube esekhululwa nguBig njengoba ecula "Ngesikhathi ngineminyaka eyishumi nesikhombisa," futhi uCarrie ucishe wakhafula iwayini lakhe.
Amahlaya eSt Ku-11th Street
Kulungile ake sisuke kude noCarrie noBig okwesikhashana bese sibuyela esitolo samaStics samaSt. Yilapho ahlangana khona noWade - insizwa enganakekile emhlabeni (osahlala nabazali bakhe) okwamangaza uCarrie ngemuva kokungena kukanina lapho bobabili babephethe insangu futhi wasola ukhula kuCarrie. Uhamba nalo futhi uthatha ukhula aqonde nalo kwesinye isigcawu esihlekisayo efulethini likaCarrie lapho elabelana noSamantha, uCharlotte, noMiranda, nalapho ngemuva kokuboshwa ngokuwubhema esidlangalaleni, uCarrie goofily umemezela usuku njengolo lapho eboshelwa ukubhema i-doobie.
Indawo ekubhakelwa kuyo iMagnolia ku-401 Bleecker Street
Lokhu kungenzeka kungabi yindawo ekhumbulekayo kaCarrie noMiranda behlanganyela amakhekhe njengoba behlangana ngobudlelwano, kepha leli bhikawozi laduma umhlaba wonke ngenxa yalesi sidlo esabiwayo. Futhi ngiqonde ukuthi ngubani ongadingi isizathu sokuma ebhikawozi ukuze athole okuthile?
Isifuba Sokuthakazelisa ku-156th no-7th Avenue S
Okusiholela ekwelapheni okwabamba uCharlotte kangangokuba kwadingeka ukuthi kungenelele okwenzekile esiqeshini lapho iRabbit vibrator yakhe, ayithenge kulesi sitolo esincane esithandekayo, yathathwa ukuze abuyele empilweni ejwayelekile yansuku zonke futhi athole izizathu zokushiya indlu yakhe futhi.
Ingadi YeJefferson Market phakathi kuka-6th Avenue no-W 10th Street
Ukuqhubekela phambili ezintweni ezinhle kakhulu, kuthiwani ngale nsimu yomphakathi enhle lapho uMiranda noSteve banquma ukushada khona? Wayezimisele ngokuthola indawo “engeyona icky,” futhi wakwenza lapho isikhwama sakhe sokudla siphuka phambi kwamasango engadi. Isibonakaliso ngokuqinisekile singasho ukuthi lena bekuyindawo.
UKim Cattrall, uCynthia Nixon, uKristin Davis noSarah Jessica Parker (Isithombe nguBill Davila / FilmMagic)
IPlaza Hotel ku-5th Avenue naku-59th Street
Ngempela, noma yiluphi uhambo oluya e-NYC kufanele lubandakanye okungenani ukuhamba ngezinyawo endaweni yokwamukela izivakashi eThe Plaza Hotel, akunjalo? Futhi yebo, bekukhona nesigcawu lapha, lapho uCarrie ekhuluma noBig ngemuva kwephathi yakhe yokuzibandakanya kuNatasha - ambize ngenduku engenamphefumulo. Kulesi sigcawu uphinde wenza imibhalo emifushane ye-movie ethi “The Way We Were,” lapho exubha izinwele zikaBig ngeminwe yakhe bese ethi, “Intombazane yakho iyathandeka, Hubble.”
Futhi kunezinye izindawo eziningi ongazihlola - I-Russian Samovar ku-256 W 52nd Avenue lapho uCarrie eya khona ngosuku lwakhe lokuqala ne "Russian," edlalwa nguMikhail Barishnykov, kanye neColumbus Circle Fountain ku-59th Street naku-8th Avenue lapho uCarrie ephuka khona Inhliziyo ka-Aidan okwesibili futhi kube kuhle.
Bese kuthi kube neNew York City Public Library Main Branch ku-5th Avenue naku-42nd Street lapho uCarrie noBig kufanele bashade khona (amagama abalulekile kufanele). Futhi ibhilidi lapho uCarrie noBig bathola khona ifulethi labo lephupho le-NYC lapho kufanele babe khona (kukhona lawo magama futhi) bahlala ngemuva komshado e-1010 Fifth Avenue. Cha, linda. Lokho kungenye yama-movie ngemuva kohlelo lwe-TV. Kepha lokho kungenye uhlu lwamabhakede wezindawo ongazivakashela.